မျက်စိကန်း & သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံ VIAS PCB - KingSong PCB နည်းပညာ, Ltd
မျက်စိကန်း & သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံ VIAS PCB, PCB VIAS ကနေတဆင့်မျက်စိကန်းမှတဆင့်မှတဆင့်-တွင်းထဲသို့ခွဲခြားနှင့် via.When သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံနိုင်ပါတယ်သင်တစ်ဦး circuit board ပေါ်တွင်အလုံအလောက် PTH VIAS မထားချင်ပေမယ့်အာကာသကန့်သတ်သည်, သင်ျဂွိုဟျ & မျက်စိကန်း VIAS PCB အဖြေတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ် ။
မျက်စိကန်းသောသင်ျဂွိုဟျ VIAS မျက်နှာပြင်၏ကန့်သတ်အောက်မှာ PCB ၏အလွှာများအကြားချိတ်ဆက်ဖို့အသုံးပြုကြသည်။
မျက်စိကန်း & သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံမှတဆင့်၏အကျိုးကျေးဇူး
ယင်းအလွှာရေတွက်သို့မဟုတ်ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးဒီဇိုင်းပေါ်မှာဝါယာကြိုးများနှင့် pads ၏သိပ်သည်းဆသတ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်း
PCB circuit ကိုအချိုးကိုလျော့ချ
လည်းခေါ်မျက်စိကန်း / သင်ျဂွိုဟျ VIAS PCB, HDI PCB meet the density improvement of boards without increase number of layers or board size. Therefore, blind/buried vias are usually applied in HDI PCBs. It frequently used in mobile phones, wireless commination, MID, Notebook etc.